Mobile Legend ရဲ့ Halloween Skins လမ်းညွှန် | Codashop Blog MM
Mobile Legend ရဲ့ Halloween Skins လမ်းညွှန်
ကဲHalloween နီးလာပြီဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Land of Dawn က အကောင်းဆုံး Hero တွေကလည်း အလွန်မိုက်ပြီး ကြောက်စရာကောင်းတဲ့၀တ်စုံ တွေထွက်လာပါပြီ။ Roger, Nana, Franco နဲ့ တစ်ခြား Heros တွေမှာလည်း ကြောက်စရာကောင်း ပုံအသွန်အပြင်တွေကို ဘယ်လို အချိန်မှီ ရယူနိုင်မလည်းပြီး သင့်ရဲ့ ရန်သူတွေကို ကြောက်ရွန့် အောင်လုပ်ကြမလည်း။
Time-Limited Event မှာဘဲရရှိနိုင်ပါတယ်။
တစ်ချိန်တုန်းက အလွန်စင်ကြယ်လှတဲ့နှလုံးသားရှိပြီး ဒီမြင့်မြတ်လှတဲ့ မုဆိုးကြီး Lycanthrope အသွင်ပြောင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ လူသားတစ်ဝက် နဲ့ ဝံပုလွေတစ်ဝက် ဖြစ်တဲ့ Roger ဟာ သင့် ရဲ့ ရက်စက်တဲ့ အကောင်ကြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပြုပြင်ပြောင်းလည်းထားတဲ့ Dr. Beast Epic Skin ဆန်းသစ်တဲ့ ဓာတ်ခွဲခန်းကုတ်အင်္ကျီ နဲ့အတူ စက်သေနတ်များတပ်ထားပြီး အလွန်ကြီးသော ဆေးထိုးပြွန်ကွန်တိန်နာနှစ်ခုပါ၀င်ပါတယ်။
Diamond 749 ဖြင့်၀ယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
ဒါကတော့ Timeless Scarecrow ၀တ်စုံပါ ။ Franco ရဲ့ ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ အထူး Halloween Skin ကတော့ စစ်ပွဲအတွင်းမှာ ရန်သူတွေကို အိပ်မက်ဆိုးတစ်ခု ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ Wheatfield Nightmare Skin ကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပင်ကို Jumbo Hooker ကို Death Scythe နှင့် ခက်ရင်းခွ ပါ၀င်တဲ့ အသက်ရှင်နေတဲ့ Scarecrow အဖြစ်ပြောင်းလည်းထားပါတယ်။
Diamond 1099 ဖြင့်၀ယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
ဒီ Lord of Heptaseas ဖြစ်တဲ့ Captain Bane က ရှေးခတ်က Aurora Heart ကြောင့် သေရာမှ ပြန်လည်ရှင်သန်လာတဲ့ ရေဘ၀ဲကြီး ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အလွန်မိုက်တဲ့ Count Dracula လို့ခေါ်တဲ့ Halloween Skin ကတော့ Gothic Looks နဲ့ အတူ သူ့ရဲ့ အထင်ကရ ထီးနဲ့ အတူ ဂဏန်းလက်မများနဲ့ အမြောက်များကို ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒါ Skin ကတော့ စျေးအကြီးဆုံး Skin တွေထဲကတစ်ခုပါဘဲ။
250 Premium Skin Fragments နှင့် ရယူနိုင်ပါတယ်။
Halloween ဆိုပေမယ့် ကြောက်စရာကောင်းစရာမလိုပါဘူး။​ Nana ရဲ့ Halloween Skin ကတော့ ချစ်စရာကောင်းပြီး ဆိုးသွင်းသောပုံလေးရှိလို့ Halloween ပုံစံလေးဆန်ပါတယ်။ လှပတဲ့ အနက်ရောင် နဲ့ ခရမ်းရောင်လေးရှိပါတယ်။ Nana ရဲ့ လင်းနို့ထဲမှာပါတဲ့ Magic Boomerang ပုံသဏ္ဏာန် ရှိပြီး ရွှေဖရုံသီးပုံလေးမျက်နှာအလယ်မှာရှိပါတယ်။
ဒီအမျိုးသမီး Support / အဆင့်မြင့် Tank ကတော့ သူမရဲ့ HalloweenSkin မှာ ဆိုးသွင်းချစ်စရာကောင်းသောအရာများအားလုံးပါ၀င်ပါတယ်။ သူမရဲ့ အနက်ရောင်နှင့်လိမ္မော်ရောင် ရှိတဲ့လင်းနို့အတောင်များ နဲ့ အရိုးစုများနှင့် အတူအလှဆင်ထားတဲ့ စုန်းဦးထုတ်လေးကို ၀တ်ဆင်ထားပါတယ်။ သူမရဲ့ အထူး Impish Trickster Skin ကို ပြီးစီးအောင် အလွန်ကြီးမားတဲ့ lollipop တူ ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။
Eerie အသွင်ရှိတဲ Clown ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုရဲ့ အာရုံပေါ်ရောက်စေပါတယ်။ Karrie ရဲ့ Special Jester skin ကတော့ ဒီ အာရုံနောက်စေတဲ့ Skin တွေထဲကတစ်ခုလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒီ Markman ရဲ့ Harley Quinn လို့ ၀တ်စုံကတော့ မျက်နှာပေါ်က ဆေးချယ်ထားတာကတော့ ကြောက်စရာကောင်းသော အသွင်ကို ပြီးပြည့်စုံစေပါတယ်။ သူက စစ်တိုက်နေတုန်း ဟာသတွေပြောမယ်တော့ မထင်ပါနဲ့ သူက လူသတ်တဲ့ Clown ပါနော်။
ရုပ်သေးရုပ် က သူနဲ့ ပုံတူတဲ့ ရုပ်သေးရုပ်လေးပါပါတယ်။ Angela ရဲ့ Special Scream Doll Skin ကတော့ Halloween အတွက် ကွတ်တိပါပဲ။ အနီ အမဲ ၀တ်စုံနဲ့ ကြောက်စရာ မှောင်မှောင် မိတ်ကပ်တွေက ဒီ အကောင်လေးရဲ့ Somber Vibe ကိုပေးပါတယ်။ Annabelle နဲ့ တူတယ်လို့ ပရိသတ်ကြီး မခံစားမိဘူးလား?
ဒီ Halloween Skin တွေကို ပရိသတ်ကြီးတို့ ဘယ်လိုမြင်ကျလဲ? နောက်ဘယ်သူတွေ အကြောင်းဖတ်ချင်ကြသေးလဲ? Comment မှာ ဖတ်ချင်တဲ့ Character နာမည်ရေးသွားလိုက်ကြပါအုန်းဗျို့!
Mobile Legends Diamonds တွေကို Codashop မှာဘဲ ဖြည့်လိုက်ကြပါ။ ကျွန်တော်တို့ #BetterFasterSafer ငွေဖြည့်မှု နဲ့ အဆင်ပြေချောမွေ့တဲ့ ဂိမ်းကစားမှု ကို အာမခံပါတယ်။
Previous articleကဲကဲ ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ PUBG ပရိသတ်ကြီးကို PUBG Mobile Lite က Zombies တွေ နဲ့ မနက် အချိန် အထိ ဘယ်လိုအသက်ရှင်အောင်နေကြမလည်း ဆိုတာကိုပြောပြမှာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Next articleပရုိမုိးရွင္းထဲသုိ႔ပါ၀င္ပါက သိထားသင့္သည့္အခ်က္မ်ား။